မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေနဲ့ သေဆုံးမှုတွေ တိုးလာနေတာကြောင့် ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ ဆေးစစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ့်ဖာသာ ၀ယ်ယူစစ်ဆေးသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကူးစက်မြန် မျိုးကွဲသစ်တွေနဲ့အတူ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ တတိယလှိုင်းကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူ တရားဝင် ခွင့်ပြုမထားတဲ့ ဆေးစစ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုလာနေကြတာပါ။
မနေ့တုန်းကပဲ ဆေးစစ်ပစ္စည်း (Test Kit) ကို ကိုယ့်ဖာသာ ၀ယ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာမှာ အခုလိုစရှင်းပြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ခံ ။. ။ မတို့ကတော့အိမ်မှာပဲ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် Test Kit ဝယ်ပြီးစစ်လိုက်တာမျိုး။ ကျမတို့က Second Waveကတည်းကစစ်တယ်ရှင့်။ ကျမတို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ အပြင်ပိုင်းထွက်နေရတော့ ကိုယ်ကြောင့် သူများမကူးစေချင်ဘူး။ ကိုယ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်း ဒီလိုမျိုး ၂ရက် ၃ ရက်အတွင်းမှာ ထိတွေ့မှုရှိပြီး အဲဒီလူက ကိုယ်ဗစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဖျားနာတယ်လို့ပြောရင် ကိုယ်ဖာသာကိုယ် သေချာချင်လို့စစ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Third Wave မှာတော့ ပိုသတိထားတယ်။Third Wave မှာတော့ ဖြစ်လာတဲ့သူတွေလည်းများတယ်။ ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း အရင်လိုမျိုး ကုသမှုFacility တွေက အဆင်မပြေတော့ဘူးအခါကြတော့ စစ်တဲ့သူတွေလည်း ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုပြီးများလာတယ်ရှင့်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ Second Wave မှာ စစ်တာနဲ့ အခုစစ်တဲ့အနေအထားမှာ ဘယ်လိုအဓိကကွာခြားတာကို သတိပြုမိလဲ။
ရန်ကုန်မြို့ခံ ။. ။ ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆို စိတ်လုံခြုံမှုပေါ့ ။ Second Wave တုံးက ကျမတို့ ရုံးမှာရှိတဲ့ Policy အရ ရုံးမှာ အပြင်သွားတဲ့သူအတော်များများက ဒီလိုမျိုးစစ်ကြမယ်ဆိုပြီးစစ်လိုက်တာပဲ။ ဒီ Third Wave မှာကြတော့ ကိုယ်မှာက ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကုသမှုအပိုင်းမှာ စိတ်မချရတဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြီးတော့ စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ စစ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ အခုဒီမှာကြတော့ စိုးရိမ်ပြီးတော့ကိုယ်ကို အပြင်ထွက်တာများတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့သူများတယ်ဆိုရင် စစ်လိုက်ကြတာပေါ့။ Second Wave တုံးက ရုံးကနေ တာဝန်ယူတာ ။ ဒီ Third Wave တုံးကတော့ ရုံးကလည်း Work from Home ဖြစ်သွားပြီလေ။ Second Wave နဲ့ Third Wave ကြားထဲက ဖြစ်တာကိုပြောတာပါ။ Work From Home ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Third Wave မှာကတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဖြစ်သွား စစ်ကြတာလေ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အရင်တုံးက ရုံးကတာဝန်ယူပေးခဲ့သောလည်းပဲ အခုဟာက စိုးရိမ်မှုနဲ့စစ်ရတာဆိုတော့ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ ကြုံရသေးလဲ။
ရန်ကုန်မြို့ခံ ။. ။ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်ကြတော့ မှန်မှမှန်ပမလားဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတော့ရှိတာပေါ့။ ကျမတို့က Health Care Industery ကမှမဟုတ်တာ။ သာမန်ပြည်သူတွေပဲလေ။ အကုန်လုံးကတော့ ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ အညွှန်းတွေကိုတော့ အကုန်ဖတ်တာပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ပညာပေး ဗွီဒီယိုတွေလည်း ကျမတို့ကြည့်တာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် မှန်မှ မှန်ပမလားဆိုတာလည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ အချင်းချင်းမှာလည်းပဲ ကိုယ်ရဲ့ Leb က မဟုတ်ဘူး။ Blood Test က မှန်တယ်။ Own Opinion တွေနဲ့ သွားကြတာလေ။ ဒါပေမယ်လည်း ကျမတို့မှာ No Choice လေ။ ဒါကပဲ ကျမတို့မှာ လက်ရှိအနေအထားက သိပ်ပြီးတော့ နှာလေးစီးရင် ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့ ၃ ရက် ၅ရက်လောက် တွေ့ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေက ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးပဲရှိတာကို။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက Prove လုပ်ထားတဲ့ Test ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဘယ်သူက ကျမတို့ကို ဘယ်သူက Quility Control လုပ်ပေးထားလို့ လဲ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို Quility Control လုပ်ပေးတဲ့ စင်တာရှိလို့လား။ ကျမတို့က Ground Zero မှာနေတာလေ။ စိုးရိမ်မှုဆိုတာ ရင်မှာပိုက်ပြီးနေတာလေ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ ရလဒ်မှာအပေါ်ဘယ်လို ခံစားရလဲ
ရန်ကုန်မြို့ခံ ။. ။ ကျမကြတော့ Clear ပေါ့။ မရှိဘူး။ ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် နှစ်ကြောင်းပေါ်ရမယ်ပေါ့။ တကြောင်းတည်ပေါ် ပေါ်တဲ့အကြောင်းကလည်း C နေရာမှာ ရောက်နေရင် Clear ပေါ့။ ဒါပေမယ်လည်း နောက် ၄ ရက်နေရင်ပေါ့။ ၃ ရက်ခြားတခါစစ်မယ်။ နောက် ၇ရက်ခြားတခါစစ်မယ်။ Ok နောက်တခေါက်ထပ်စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီ Second Wave မှာ စစ်ခဲ့တုံးကရော ပိုးတွေ့မှုအနေအထားရှိခဲ့လား။
ရန်ကုန်မြို့ခံ ။. ။ ကျမကိုယ်တိုင်ရော ကျမပတ်ဝန်ကျင်ရော Second Wave တော်တော်ကိုနည်းတယ်ရှင့်။ ရှိခဲ့လိုရှိရင် အသိမိတ်ဆွေထဲကပဲ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုတခေါက်မှာရော
ရန်ကုန်မြို့ခံ ။. ။ များတာပေါ့။ အခုနပြောနေတဲ့အထိ ကျမမှာ မိတ်ဆွေ ၁၀၀ ရှိရင် ၄ဝ ကျော် ၅ဝ လောက်ဖြစ်နေကြပြီ။ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေထဲကပဲပေါ့။ ဥပမာ ကျမနဲ့ ၁ဝရက်ကတွေ့တဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ၅ ရက်တုံးကတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေ။ အခု တဖြေးဖြေးဖြစ်လာတာလေ။ အကိုနဲ့ စကားမပြောခင်ထိကို တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာနေတာပေါ့နော်။ သူဖြစ်ပြန်ပြန် ငါဖြစ်ပြန်ပြီဆိုပြီး ကိုယ်အနားကို ရောက်လာနေပြီ။ စာရင်းတွေက တိုးတိုးလာပြီ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ရောဂါ ကိုယ့်ဖာသာ စစ်တဲ့သူတွေရှိလာ
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကူးစကျမှုတှနေဲ့ သဆေုံးမှုတှေ တိုးလာနတောကွောငျ့ ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ ဆေးစဈတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ကိုယျ့ဖာသာ ဝယျယူစဈဆေးသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ကူးစကျမွနျ မြိုးကှဲသဈတှနေဲ့အတူ ကိုဗဈကပျရောဂါ တတိယလှိုငျးကွောငျ့ စိုးရိမျမှုတှနေဲ့အတူ တရားဝငျ ခှငျ့ပွုမထားတဲ့ ဆေးစဈပစ်စညျးတှကေို အသုံးပွုလာနကွေတာပါ။
မနတေု့နျးကပဲ ဆေးစဈပစ်စညျး (Test Kit) ကို ကိုယျ့ဖာသာ ဝယျယူစဈဆေးခဲ့တဲ့ ရနျကုနျမွို့ခံတဦးကို ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျ မေးမွနျးရာမှာ အခုလိုစရှငျးပွပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ခံ ။. ။ မတို့ကတော့အိမျမှာပဲ ကိုယျဖာသာကိုယျ Test Kit ဝယျပွီးစဈလိုကျတာမြိုး။ ကမြတို့က Second Waveကတညျးကစဈတယျရှငျ့။ ကမြတို့အလုပျလုပျနရေတဲ့သူတှအေနနေဲ့ကတော့ အပွငျပိုငျးထှကျနရေတော့ ကိုယျကွောငျ့ သူမြားမကူးစခေငျြဘူး။ ကိုယျသှားတဲ့နရောမှာလညျး ဒီလိုမြိုး ၂ရကျ ၃ ရကျအတှငျးမှာ ထိတှမှေု့ရှိပွီး အဲဒီလူက ကိုယျဗဈဖွဈသှားတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ဖြားနာတယျလို့ပွောရငျ ကိုယျဖာသာကိုယျ သခြောခငျြလို့စဈကွညျ့လိုကျတာပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Third Wave မှာတော့ ပိုသတိထားတယျ။Third Wave မှာတော့ ဖွဈလာတဲ့သူတှလေညျးမြားတယျ။ ဖွဈတဲ့အခါမှာလညျး အရငျလိုမြိုး ကုသမှုFacility တှကေ အဆငျမပွတေော့ဘူးအခါကွတော့ စဈတဲ့သူတှလေညျး ကမြပတျဝနျးကငျြမှာ ပိုပွီးမြားလာတယျရှငျ့။
ရနျကုနျမွို့ခံ ။. ။ ဘယျလိုကှာခွားလဲဆို စိတျလုံခွုံမှုပေါ့ ။ Second Wave တုံးက ကမြတို့ ရုံးမှာရှိတဲ့ Policy အရ ရုံးမှာ အပွငျသှားတဲ့သူအတျောမြားမြားက ဒီလိုမြိုးစဈကွမယျဆိုပွီးစဈလိုကျတာပဲ။ ဒီ Third Wave မှာကွတော့ ကိုယျမှာက ဖွဈလာခဲ့ရငျ ကုသမှုအပိုငျးမှာ စိတျမခရြတဲ့အတှကျ ကွိုတငျပွီးတော့ စိုးရိမျတဲ့စိတျနဲ့ စဈရတဲ့ပုံစံမြိုးကိုဖွဈသှားတာပေါ့။ အခုဒီမှာကွတော့ စိုးရိမျပွီးတော့ကိုယျကို အပွငျထှကျတာမြားတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျနဲ့ ထိတှတေဲ့သူမြားတယျဆိုရငျ စဈလိုကျကွတာပေါ့။ Second Wave တုံးက ရုံးကနေ တာဝနျယူတာ ။ ဒီ Third Wave တုံးကတော့ ရုံးကလညျး Work from Home ဖွဈသှားပွီလေ။ Second Wave နဲ့ Third Wave ကွားထဲက ဖွဈတာကိုပွောတာပါ။ Work From Home ဖွဈသှားပွီဆိုတော့ Third Wave မှာကတော့ ကိုယျသဘောနဲ့ကိုယျဖွဈသှား စဈကွတာလေ။
ရနျကုနျမွို့ခံ ။. ။ ကိုယျဖာသာကိုယျကွတော့ မှနျမှမှနျပမလားဆိုတဲ့ ယုံကွညျမှုတော့ရှိတာပေါ့။ ကမြတို့က Health Care Industery ကမှမဟုတျတာ။ သာမနျပွညျသူတှပေဲလေ။ အကုနျလုံးကတော့ ဒီခတျေမှာရှိတဲ့ အညှနျးတှကေိုတော့ အကုနျဖတျတာပေါ့လေ။ ပွီးတော့ ပညာပေး ဗှီဒီယိုတှလေညျး ကမြတို့ကွညျ့တာပဲလေ။ ဒါပမေယျ့ မှနျမှ မှနျပမလားဆိုတာလညျးရှိတယျ။ ပွီးတော့ အခငျြးခငျြးမှာလညျးပဲ ကိုယျရဲ့ Leb က မဟုတျဘူး။ Blood Test က မှနျတယျ။ Own Opinion တှနေဲ့ သှားကွတာလေ။ ဒါပမေယျလညျး ကမြတို့မှာ No Choice လေ။ ဒါကပဲ ကမြတို့မှာ လကျရှိအနအေထားက သိပျပွီးတော့ နှာလေးစီးရငျ ၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျနဲ့ ၃ ရကျ ၅ရကျလောကျ တှခေဲ့တဲ့ မိတျဆှကေ ဖွဈပွီဆိုရငျ ဒါလေးပဲရှိတာကို။ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက Prove လုပျထားတဲ့ Test ဖွဈပါတယျလို့ ဘယျသူက ကမြတို့ကို ဘယျသူက Quility Control လုပျပေးထားလို့ လဲ။ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှကေို Quility Control လုပျပေးတဲ့ စငျတာရှိလို့လား။ ကမြတို့က Ground Zero မှာနတောလေ။ စိုးရိမျမှုဆိုတာ ရငျမှာပိုကျပွီးနတောလေ။
ရနျကုနျမွို့ခံ ။. ။ ကမြကွတော့ Clear ပေါ့။ မရှိဘူး။ ကိုဗဈဖွဈနတေယျဆိုရငျ နှဈကွောငျးပျေါရမယျပေါ့။ တကွောငျးတညျပျေါ ပျေါတဲ့အကွောငျးကလညျး C နရောမှာ ရောကျနရေငျ Clear ပေါ့။ ဒါပမေယျလညျး နောကျ ၄ ရကျနရေငျပေါ့။ ၃ ရကျခွားတခါစဈမယျ။ နောကျ ၇ရကျခွားတခါစဈမယျ။ Ok နောကျတခေါကျထပျစဈကွညျ့မယျပေါ့။
ရနျကုနျမွို့ခံ ။. ။ ကမြကိုယျတိုငျရော ကမြပတျဝနျကငျြရော Second Wave တျောတျောကိုနညျးတယျရှငျ့။ ရှိခဲ့လိုရှိရငျ အသိမိတျဆှထေဲကပဲ။